ရေပြွန်ဘွိုင်လာ ပြုလုပ်ထားပုံ သဘောမှာ မီးပြွန် ဘွိုင်လာနှင့် ပြောင်းပြန်ဖြစ်၏။ ဤဘွိုင်လာတွင် ရေကို ပြွန်ကလေးများအတွင်းမှ စီးဖြတ်သွားလာစေ၍ မီးဖိုက ထိုပြွန်ကလေးများကို အပူတိုက်ပေးသည်။ ရေကို ပြွန် ကလေးများအတွင်း၌ ဆူစေသည့်အတွက် ရေပြွန်ဘွိုင်လာသည် အခြားဘွိုင်လာမျိုးတို့ထက် စိတ်ချရသည်ဟု ယူဆ ကြသည်။ ဤဘွိုင်လာမျိုးကို ဆာဂိုးဇွာသီ ဂါနီဆိုသူက ၁၈၂၆ ခုနှစ်တွင် အောင်မြင်စွာ တီထွင်အသုံးချခဲ့လေ သည်။ ပြဒါးငွေ့ဗွိုင်လာ သည် ရေပြွန်ဘွိုင်လာနှင့် အတူတူလိုပင် ဖြစ်သည်။ ရေမှ ရေငွေ့ဖြစ်အောင် အပူတိုက်ပေး သကဲ့သို့ဤဘွိုင်လာတွင် ပြဒါးကို အငွေ့ဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးသည်။ ပြဒါးငွေ့သည် တပ်ဆင်ထားသော ပြွန်ကို လျှောက်၍ လျှပ်စစ်လုပ်စက်များကို မောင်းသည့် ပြဒါးငွေ့ရဟက်စက်ကို လည်စေသည်။ ထို့နောက် ပြဒါးငွေ့သည် ရေဖြတ်သန်းသွားနေသည့် ကွန်ဒင်ဆာသို့ ရောက်သောအခါ ထိုရေများသည် ဆူ၍ အခြားပြွန် တစ်ခု ထဲသို့ရေခိုးရေငွေ့အဖြစ် ဖြတ်သွားပြီးလျှင် ရေနွေးငွေ့ ရဟတ်စက်ကို လည်စေသည်။ ယင်းရဟတ်စက်က လျှပ်စစ် လုပ်စက်ကို လည်စေပြန်သည်။ ပြဒါးငွေ့သည် ရေကိုဆူစေပြီး နောက် အငွေ့အေးကာ ပြဒါးရည် ပြန်ဖြစ်လာပြီးလျှင် ဘွိုင်လာဘက်သို့ပြန်စီးသည်။ ယင်းသို့ဖြင့် ပြဒါးသစ် ထပ်ဖြည့်ရန် မလိုဘဲ အငွေ့ဖြစ်လိုက် အရည်ပြန်ဖြစ်လိုက်နှင့် စက်များကို အဆက်မပြတ် လည်စေသည်။ 
↑ Frederick M. Steingress (2001)။ Low Pressure Boilers (4th Edition ed.)။ American Technical Publishers။ ISBN 0-8269-4417-5။ CS1 maint: extra text (link)
↑ Frederick M. Steingress, Harold J. Frost and Darryl R. Walker (2003)။ High Pressure Boilers (3rd Edition ed.)။ American Technical Publishers။ ISBN 0-8269-4300-4။ CS1 maint: extra text (link)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘွိုင်လာ&oldid=702599" မှ ရယူရန်